I-Wooden Villa - WOW Bison Woods
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Balamurugan
I-Wooden Villa yethu yangasese etholakala emaphethelweni e-Vasambadi Coffee Estate ku-Berry Gardern Laylout. Lawa makhabethe amabili athokomele Okhuni (750 sq. Ft) aneGumbi Lokuphumula, Ingadi Yangasese, I-CCTV Evikelekile, iGeneretha engu-25kv, iGeyser ngayinye kanye Nendawo Yokupaka Imoto. I-Wooden Villa ikude nempilo ephithizelayo, iwufanelekela kangcono Umndeni Omkhulu ojabulela ukuba senhliziyweni yemvelo futhi ofisa ukufakaza nge-Perfect Family Vacation.
Itholakala emaphethelweni ehlathi elishisayo i-Evergreen e-Thalaisolai Forest range e-Yercaud
I-WOW Bison Woods iyindawo yokungcebeleka engabizi kakhulu, eco-friendly etholakala e-Yercaud endaweni ephakeme ngamamitha angama-4970 ngaphezu kwezinga lolwandle. I-Yercaud iyidolobha elihlanzekile elilungele abahambi abathanda imvelo abafuna ikhefu ezimpilweni zabo ezimatasa. Indawo yokungcebeleka enezindawo ezinhle kanye nabasebenzi abanobungane abahlinzeka ngezinsizakalo zomuntu siqu inikeza ukuhlala ekhaya ezivakashini. Ukudla kulungiswa ngokwezidingo zakho; kushisa futhi kusha.
I-WOW Bison Woods iphinde inikeze ngendawo yokuhlala ehamba phambili ukusuka emakamelweni okulala athokomele ngokwedlulele kuya ematendeni amahle kanokusho. Izibuyekezo ezinikezwe i-WOW Bison Woods zihlukile futhi zifakwe ohlwini njengenye yezindawo zokungcebeleka eziphezulu e-Yercaud ngu-Trip Adviser. Ukuzizwa ngale ndawo ye-boutique resort kuzokushiya ufuna ukubuya. Hlela iholide lakho futhi ubhukhe kusenesikhathi
I-WOW Bison Woods iyindawo yokungcebeleka engabizi kakhulu, eco-friendly etholakala e-Yercaud endaweni ephakeme ngamamitha angama-4970 ngaphezu kwezinga lolwandle. I-Yercaud iyidol…